Ady amin’ny Covid: nanolotra vaksiny Pfizer efatra hetsy daozy ny Amerikanina | NewsMada
Ady amin’ny Covid: nanolotra vaksiny Pfizer efatra hetsy daozy ny Amerikanina
Mitohy hatrany ny fiaraha-miasa sy fanohanana. Nigadona omaly teny Ivato ny vaksiny vaovao Pfizer, avy amin’ny Amerikanina hanampiana amin’ny ady atao amin’ny Covid-19.
Miisa 398 970 daozy ity vaksiny vaovao ity, azo antoka sy efa vita sedra raha ny toky avy amin’ny Amerikanina hatrany.
Tafiditra anatin’ny ezaka ataon’ny fitondran’ny Filoha Biden sy Harris hampitomboana haingana ny isan’ireo vita vaksiny maneran-tany hampitsaharana ity valanaretina ity ireo vaksiny avy amin’ny Covax ireo.
“Ny vaksiny faobe no fepetra mahomby indrindra ilaina hampiharina hiantohana ny fiverenan’ny fiainana ara-dalàna ao anatin’ny fotoana fohy”, hoy ny Tale Jeneralin’ny USAID Madagasikara, omaly.
Fanampiana fanintelony avy amin’i Etazonia
Fanintelony izao ny vahoaka amerikana no nanolotra vaksiny ho an’i Madagasikara. Nanolotra vaksiny Johnson&Johnson miisa 302 750 daozy izy ireo, ny volana jolay teo. Avy amin’ny tahiriny manokan’i Etazonia ary nampiany 336 000 fatra izany tamin’ny volana oktobra.
Mitentina 5 100 000 dolara ny famatsiam-bola nomen’ny USAID ho an’ireo rafitra ara-pahasalamana sy nanamorana ny fanaovana vaksiny. Ankoatra izany, 2 500 000 dolara nanampiana ny fitaterana sy ny fitsinjarana ireo vaksiny …